Ndi otu ederede | Akụrụngwa n'efu
Hardware Libre bụ oru ngo raara nye maka ikesa banyere teknụzụ Open Hardware ọhụrụ. Ọtụtụ ndị amaara nke ọma dịka Arduino, Rasberi mana ndị ọzọ abụghị FPGAs. Anyi bu netwok blog nke Blog akụkọ nke na-arụ ọrụ kemgbe 2006.
Na 2018 anyị abụrụla ndị mmekọ nke Freewith otu n’ime ihe omume Spanish kachasị mkpa metụtara ngagharị na mmeghe, na ngwaike na ngwanrọ
Ndi otu ngosiputa ihe ngwaike nke Liberia mejuputara otu ndi mebere ya, ndị ọkachamara na Akụrụngwa, ngwá electronic na teknụzụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iso n’otu otu, ị nwere ike zitere anyị fọm a ka ị bụrụ onye ndezi.
Ọkachamara ọkachamara nwere mmasị na ụwa nke robotics na ngwaike n'ozuzu site na nwata, ihe butere m inwe obi iru ala banyere teknụzụ kachasị ọhụrụ ma ọ bụ ịnwale ụdị bọọdụ na okirikiri niile dabara n'aka m.
Abụ m onye na-ahụ n'anya na kọmputa na karịsịa Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ. Ihe ohuru n’ime ihe nile banyere uwa a di egwu, nke m huru n’anya kesara ihe nile m na achoputa ma muta. Free Hardware bụ ihe na-akpali akpali ụwa, enweghị m obi abụọ ọ bụla banyere nke ahụ.
Tony nke Mkpụrụ osisi
Geek riri ahụ na teknụzụ, wargames na onye na-eme ya. Chịkọta na ịtọsasị ụdị akụrụngwa niile bụ agụụ m, ihe m na-etinye oge kachasị na ndụ m kwa ụbọchị, yana ihe m mụtara na ya.
Onye hụrụ ihe ọ bụla ụdị teknụzụ ọ bụla na onye ọrụ nke ụdị sistemụ arụmọrụ niile, yana onye na-enwe mmasị tinker na ụdị ngwaọrụ eletrọniki ọ bụla dabara n'aka m.